Varimi vari kubhadhariswawo mari dzakasiyana zvichienderana nekuti vane dhora rekuAmerica here, mari yemunyika kana kuti Ecocash nedzimwe dzemakadhi.
Hurumende nekune rimwe rutivi iri kukurudzira vamwe vemakambani akazvimirira kuti vabatsirewo varimi nezvikweti kurima zvakaita sesoya beans nezvimwe
Varimi ava vanoti havana mbeu yekudyara sezvo iri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe murimi anorima kuMakonde VaIshmael Nyikadzino vanoti havana mari yekutenga mbeu nekudaro vave kutodyara chibage chemudura chavakakohwa gore rino icho vanofunga kuti chichadzikisa gohoo ravo.
Pakiti yembeu yechibage yemakirogiramu gumi iri kutengwa nemadhora ari pakati pemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi maviri zvichienderana nekuti imbeu yemhando ipi.
VaNyikadzino vanoti vagari vanofanirwa kupihwa chibage chehupfu sezvo kuine nzara zvekuti vanhu vachapedzisira vokanga mbeu.
Zimbabwe yakatarisanawo nenzara inotyisa sezvo vanhu mamiriyoni masere vari kuda kubatsirwa nechikafu.
Mumwe mugari akagariswa patsva kuBanket VaUpenyu Dzvove vanoti varimi vakawanda havana mombe dzekurimisa sezvo dzakafa. (The onus is on you to probe kuti what killed the cattle not write that he did not say)
Mutungamiri weZimbabwe Farmers' Union (ZFU) VaWonder Chabikwa vanotiwo mbeu yakanonoka kuuya uye vakawanda vari kukundikana kuzadzikisa zviri kudiwa nemabhanga paine nguva kuti vakwerete mari pasi pechirongwa checommand agriculture.
Vanhu vanokwanisa kukwereta mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture kuburikidza nebhanga reCommercial Bank of Zimbabwe (CBZ), Agribank, CBZ, Stanbic ne Zimbabwe Women’s Microfinace Bank. Mari iri kunzi ichashandiswa pachirongwa ichi inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana maviri.
Chirongwa cheCommand Agriculture ichi mukakore adarika change chichishorwa zvakanyanya sezvo dzimwe mari dzinodarika mabhiriyoni matatu dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka.
Kunyange hazvo varimi vari kuti vakaomerwa, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekuMahusekwa mudunhu reMashonaland East nguva pfupi yapera kuti mvura zvayaturuka vanofanirwa kubuda mudzimba varime vachiti vasina mbeu vanopihwa mbeu yehurumende pasi pechirongwa chePresidential Scheme.
Asi vakanofanobata chigaro chevanotungamira mabasa edunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Administrator VaChenai Media Mugandani vanoti mbeu iyi inongopihwa chete vanhu vanoshaiwa vasina kana mombe.
Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda neZimbabwe Farmers Unio VaPrince Kuipa vanoti varimi vari kusangana nematambudziko ekushaya zvekurimisa nekupihwa mbeu nehurumende nguva yapera.
VaKuipa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nguva iripo. Kunze kwekushaya mbeu vakawanda vanoti varimi vane minda asi havana zvikwanisiro.
Mutungamiriri webato reMDC Alliance, VaNelson Chamisa vachitaurawo pamusangano wakamboitirwa kuKariba vakashoropodzawo hurongwa hwehurumenda hwekutadza kupa varimi matirakita ekurimisa vachiti kurima nemombe zvinotadzisa varimi kurima minda yakakura kuti vakohwe pakuru.
Hurumende inoti varimi vanosvika zviuru mazana manomwe vari kupihwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chePresidential Scheme vamwe vanosvika zviuru mazana mana vanotora zvikwereti pasi pechirongwa cheCommand Agriculture.